Safarka Warshadda - Xuzhou Goldfire Shove Co., Ltd.
Bandhigga Xoog Farsamo ee Shirkadda
Tan iyo markii la aasaasay, shirkadda ayaa had iyo jeer u hoggaansamey sayniska iyo tikniyoolajiyadda sida hagaha, u janjeedha suuqa, fiiro gaar ah u leh hal-abuurka sayniska iyo farsamada, hagaajinta awoodda cilmi-baarista madaxbannaan iyo horumarinta shirkadaha, dardar-gelinta horumarinta shirkadaha.
Sanado badan, waxaan aheyn madaxbanaan horumarin alaab, sida taxanaha FO-05, taxanaha FO-07 waa cilmi baaris iyo horumaro u gaar ah, buun buunin ma ahan in la yiraahdo awooddeena farsamo, xakamaynta tayada, qaabeynta iyo awooda cilmi baarista ayaa kujira heerka hogaaminta ee warshadaha.
Waxaan haynaa koox cilmi baaris iyo horumarineed oo aad u fiican, oo loogu talagalay horumarinta iyo horumarinta alaabooyinka cusub. Waxaa loo qaabeyn karaa macaamiisha, si loo daboolo baahiyaha kala duwan ee macaamiisha.
Foornada Goldfire waxay hadda soo saari kartaa in ka badan 100 nooc oo kala duwan oo badeecado ah, kuwaas oo inta badan diiradda saaraya dabka qoryaha gubaya, shooladda hilibka lagu dubto, shooladda kaamamka, shooladda teendhada, shooladda birta ee birta ah, dab dabka iwm. 90% waxsoosaarkayaga waxaa loo dhoofiyaa Yurub, Australia, USA iyo meelaha kale ee horumaray. Waxaan awoodnaa inaan la kulanno dalabaadka suuqa, soo saarno dab qabadyo tayo sare leh oo aan ka caawinno macaamiisheenna inay guuleystaan
Bishii Maarso 2020, waxaan kaqeyb galnay HPBEXPO gudaha Mareykanka.HPBExpo waa fursada ugufiican ee aan dib ugula xiriiro warshadaha una helno isbeddellada ugu dambeeyay, tikniyoolajiyadda iyo tababarka.
Lagu qabtay Louisville, goobta ay ku taal HPBExpo waxay soo jiidan doontaa tafaariiqleyda sare ee imanaya si ay u arkaan alaab-qeybiyeyaasha oo soo bandhigaya wax soo saarkoodii ugu dambeeyay iyo hal-abuurnimada macaamiishaadu ay dalban doonaan xilliyada soo socda.
Waxbadan ayaan ku kasbanay kaqeybgalka bandhiggan.
Istaraatijiyadaha ganacsiga iyo xalalka wax ka qabanaya caqabadaha iyo fursadaha suuqa hadda jira.
Fursadaha ku xirnaanta halyeeyada warshadaha, ganacsiyada cusub iyo alaab-qeybiyeyaasha ugu sarreeya — maqal waxa shaqeynaya iyo sida kuwa kale ula jaan qaadayaan xaaladda maanta cusub.
3.Xal loo shaqeyn karo oo isla markiiba loo isticmaali karo si loo wanaajiyo qanacsanaanta macaamiisha.
4. Helitaanka hal-abuurnimadii ugu dambeysay ee warshadaha ee alaabooyin fara badan oo shaqeynaya, tikniyoolajiyada hilibka lagu dubto, iyo qalabka kululaynta iyo kuleylka.
Intaa waxaa dheer, waxaan inta badan ka qaybgalnaa bandhigyada kale ee gudaha iyo kuwa caalamiga ah, iyada oo loo marayo bandhigga si aan u fahanno faa'iidada aan ka haysanno kuwa nala tartamaya, waa waxa loogu yeero naftaada ogow oo ogow cadowga, boqol dagaallo, waxaan mar walba ilaalinnaa qalbi barasho iyo ganacsi.
Badeecadaha waaweyn ayaa ka gudbay imtixaanka EU CE, waxay gaareen heerka EU Ecodesign 2022 waxayna heleen shahaadada EPA ee Mareykanka. Waxaa aqoonsan saddex nidaam oo caalami ah oo tayo, deegaan, caafimaad iyo badbaado shaqo leh.
Teendhada Qoryaha Teendhada, Foornada Cuntada lagu karsado, Bannaanka Alwaaxda Gubashada, Kaam Dabka Gubay, Kaamamka Biyaha Lagu kariyo ee Kaamamka ah, shooladda birta ah ee birta ah,